Kupfuura 6000 ExxonMobil gasi magesi atoenderana neApple Pay | IPhone nhau
Zvinopfuura zviuru zvitanhatu zveExxonMobil gasi zviteshi zvino zvinotsigira Apple Pay
Ignacio Sala | | Apple Pay, dzakawanda
Apple inoenderera nekuwedzera huwandu hwevatengesi uko Apple Pay tekinoroji inotsigirwa. Kunyangwe pachiitiko ichi zvaisagona kunzi ichokwadi Apple tekinoroji iyo inobvumidza vashandisi veEexonMobil nhepfenyuro dzebasa kuti vabhadhare kuburikidza neiyo iPhone. Kubva nezuro zvinopfuura zvuru zvitanhatu zveExxon neMobil zviteshi zvakagoverwa mumatunhu makumi mana nematanhatu eAmerica vanogona ikozvino kushandisa yavo iPhone kubhadhara mafuta. Sevhisi iyi ichawedzerwa mumwedzi iri kuuya kusvika kune zviuru zviviri zviteshi uye pakupera kwegore inotarisirwa kunge ichiwanikwa munzvimbo dzese dzemagetsi dzekambani dzinogoverwa nyika yese, dzakatenderedza zviuru gumi.
Asi, sezvandambotaura pamusoro apa, usatarisira kuzokwanisa kushandisa iyo iPhone kana Apple Watch pamapombi ekubhadhara, asi mashandiro akasiyana. Kugona kushandisa Apple Kubhadhara pane aya masitesheni ebasa, iwe unotanga kuda iyo ExxonMobile application. Kana tangova kumberi kwepombi, tinofanirwa kuvhura application, otomatiki Kuburikidza nechiratidzo cheGPS, ichatora kuti ndepapi chiteshi chebasa chatiri uye ichatibvumidza isu kusarudza iyo nhamba yepombi kwatiri.
Kana tangosarudza iyo nhamba yepombi, isu tinongofanirwa kufona huwandu hwemafuta uye kusimbisa kutenga tichishandisa Kubata ID yeiyo iPhone. Kutevera muromo wacho unoshandiswa uye tichava nemasekondi makumi mashanu nemashanu ekurembera payipi mafuta emota yedu. Kana chirongwa ichi chapera, mutengesi anozotipa risiti yekutenga.
Maitiro aya anogona kutaridza kunge akaomarara pakutanga, kwemasekondi makumi mashanu nemashanu atinayo kubva patinobhadhara kusvika taisa hosipaipi mumotokari, asi zvinoenderana nekambani iri mukana sezvo uchitibvumira kuchengetedza nguva kana tichiwedzera peturu. ExxonMobile inoti inoshandisa iyi nzira isina kunanga yekubhadhara kudzivisa kuve nekutenga zviteshi zvinoenderana neNFC tekinoroji, kunyangwe iwe uchitova nazvo, Speedpass yemakadhi emakambani ako, asi sezviri pachena haapindirani neApple Pay.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Zvinopfuura zviuru zvitanhatu zveExxonMobil gasi zviteshi zvino zvinotsigira Apple Pay
Maitiro ekudzima iOS 9 mifananidzo isina jailbreak
Kutenderera Apple Tarisa pfungwa, ine kamera uye Kubata ID